के हो पायल्स ? कसरी गर्ने उपचार ? « Drishti News – Nepalese News Portal
के हो पायल्स ? कसरी गर्ने उपचार ?
९ बैशाख २०७९, शुक्रबार 10:22 am
काठमाडौं । पायल्स, निकै कष्टकर स्वास्थ्य समस्या हो । गलत खानपान र जीवनशैलीले निम्त्याउने यो समस्याबाट धेरैजना ग्रसित हुन्छन् । तर, लाजको कारण मानिसले यो रोग लुकाउँछन् । जबसम्म समस्याले जटिल रुप लिदैन, तबसम्म उपचार खोजिदैन ।
मलद्वार र मलाशयका भित्ताहरुमा रहेको रक्तनली सुन्निने र त्यसबाट उत्पन्न हुने विभिन्न समस्या नै पायल्स हो । सुरुवाती चरणमा खानपान र जीवनशैली बदलेर यसबाट छुटकारा पाउन सकिन्छ । जटिल अवस्थामा भने शल्याक्रिया गर्नुपर्ने समेत हुनसक्छ । योग, आर्युवेदलगायत परम्परागत उपचार विधीबाट पनि यसको निदान खोज्न सकिन्छ ।
पायल्सलाई विभिन्न श्रेणीमा राखिएको छ
१. शिराहरु सुन्निएर सानो डल्लो बनी मलाशयमा नै रहने तर, बाहिर नआउने ।
२.सुन्निएका नसाहरु मल त्याग गर्दा बाहिर आउने, दिसा गरिसकेपछि पुन आफ्नै स्थानमा जाने ।
३.शिराहरुको डल्लो बाहिर आउने र आफैं यथास्थानमा नजाने ।
४.सुन्निएको नशाका डल्लाहरु निरन्तर मलद्वार बाहिर नै रहने ।
किन हुन्छ पायल्स
कब्जियत आउन नदिनका लागि खानपानमा सर्तकता अपनाउनु पर्छ । अपच हुने खानेकुराहरु, जस्तो कि मैदाबाट बनेका, प्याकेटमा राखिएका, तारेका, भुटेका, जंक फूड, मसलेदार, मासुजन्य खानेकुरा कब्जियतको कारण बन्छ । यस्तो अस्वस्थ्यकर खानेकुरा खाने तर, पर्याप्त पानी नपिउने, व्यायाम नगर्ने, फाइबरयुक्त खानेकुरा, फलफूल सेवन नगर्ने बानीले कब्जियत निम्त्याउँछ । कब्जियतले पायल्स ।
घरेलु विधी यस्तो छ